Zidane oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha kooxdiisa Real Madrid ee ka qeyb galaya kulanka Manchester City – Gool FM
Dajiye August 5, 2020
(Madrid) 05 Agoosto 2020. Zinedine Zidane ayaa wuxuu ku dhawaaqay liiska xiddigaha kooxdiisa Real Madrid ee kaga qeyb galaya kulanka Manchester City ee lugta labaad wareega 16-ka tartanka UEFA Champions League.
Macalin Zinedine Zidane iyo wiilashiisa ayaa waxay isku diyaarinayaan kulanka ay ku booqan doonaan Manchester City garoonka Etihad habeenka Jimcaha ee soo aadan, si ay u go’aamiyaan inay u soo baxaan wareega Siddeeda ee tartanka UEFA Champions League.
Zinedine Zidane ayaa wuxuu liiskan ugu yeeray 24-ka ciyaaryahan ee kaga qeyb gali doona kulanka Jimcaha ee Manchester City, balse waxaa liiskan sabab la’aan kaga maqan Gareth Bale.
Sidoo kale Zinedine Zidane ayaa wuxuu liiskan kaga reebay wiilka reer Colombia ee James Rodríguez sabab farsamo awgood, halka sidoo kale uu ka maqan yahay Mariano Díaz, kaddib markii uu ku dhacay caabuqa Coronavirus.
Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa u baahan inay guul ku gaarto 0-2, taasoo u muuqata inay tahay shaqo adag, kaddib guuldarradii 1-2 aheyd ee Los Blancos la kulantay kulankii lugta hore ee ka dhacay garoonkeeda Santiago Bernabéu.
Haddaba halka hoose kaga boggo liiska xiddigaha kooxda Real Madrid uu ku dhawaaqay tababare Zinedine Zidane, kuwaasoo ka qeyb galaya kulanka ay booqanayaan kooxda Manchester City ee tartanka UEFA Champions League.